Mbido Azụmaahịa - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (Ngụkọta Pips 150) - Forex Lens
Kagbuo onye otu
Ntọala ahia - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (150 Pips niile)
Nabata na nnọkọ Forex trading ọzọ dị ndụ site na RP Forex. Na nnọkọ taa, anyị gafere ọnọdụ ugbu a nke ahịa atọ a nyochara ụnyaahụ na ahịa anyị banyere biri na nke taa. Anyị enweghị ụfụ n'izu a (na izu gara aga) na nke ahụ bụ ihe ndị otu anyị nọ na ụlọ ahịa azụmaahịa na-etu ọnụ.
N'ime oge ahia ahia nke ụnyaahụ anyị hụrụ akara ngosi maka AUDJPY, AUDUSD & CADJPY. Abụọ nke ahia atọ abanyela dị ka ọnọdụ ntinye aha ha maka ha zutere. Anyị mere nyocha na ntinye ndụ maka mkpụmkpụ CADJPY na ụzọ ahụ ewetala ihe karịrị + 60 pips kemgbe ahụ. Anyị AUDJPY ogologo rụọ ọrụ mgbe anyị nwetara a ezumike-retest-ojupụ anya anyị isi larịị. Ulo oru abuo nyere onu ogugu nke + 100 pips na nguko.
Taa, anyị mere nyocha ọrụ ntanetị na akara mgbaama maka XAUUSD Gold na EURUSD. N'ime oge ndụ 30 anyị, anyị nwere ike ịchọpụta ntọala azụmaahịa ozugbo site na iji atụmatụ ọnụahịa anyị. Ebumnuche, anyị chọrọ ịpụ n'ahịa ndị a tupu Ozipụta Na-abụghị Ahịa Ugbo (NFP) nke echi.
Echi, Mwepụta rollgwọ Ọrụ Maka Ọrụ Ugbo (NFP) na 8:30 AM EST, elekere 2 tupu nnọkọ anyị dị ndụ. Ahịa ndị ahụ ga-agbanwe oke tupu mgbe ahapụchara ya, yabụ kpachara anya. Anyị ga-atụle gbasara mwepụta NFP, etu izu izu azụmaahịa a si banye na akara azụmaahịa maka izu na-abịa. Lee gị echi maka nnọkọ azụmaahịa anyị dị ugbu a na-amalite n'elekere 11:00 nke ụtụtụ EST na Portal Room Portal anyị. Lezie anya ma nwee ọ happyụ azụmahịa. Ọ bụrụ na isonyereghị anyị, buru n'uche na anyị na-enye ọnwa abụọ maka ọnụahịa nke 2 ruo n'abalị a n'etiti abalị (1:12 AM EST).
Banye na Portal Room Portal lelee Oge Nkụzi Live
Lelee nzụkọ Njikwa ternyaahụ: October 30th, 2019
Ọ bụrụ na ị debanyere aha maka a Ndi otu ndi ahia ahia Forex, ị nwere ike ime ya site na ịpị ebe a.
Tags: nwachukwu, currency trading, eurusd, ngwa ahịa ọnụahịa, Forex n'ókè, ụlọ azụmahịa Forex, gold, ahia igwe, ndụ ahịa Forex, ahia ahia, nfp ahia ahia, pips, uru, ahia ahia, xauusd
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2019/11/FXL-Youtube-October-31-20191.jpg 720 1280 Forex Lens News https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Forex Lens News2019-10-31 12:04:152019-11-20 15:29:48Mbido Azụmaahịa - EURUSD, XAUUSD & CADJPY (Ngụkọta Pips 150)
AUDUSD dị mkpụmkpụ na uru dị ka Dollar Bulls Eye March dị elu
Uru mmanụ US na uru EURAUD + na-echekwa GBPJPY Shorts
Ego US Dollar Aghachitere? + CADJPY na CADCHF Trades
EURNZD Shorts + USD Priming Maka Okwu Powell
Webinar Forex Live Trading - EURUSD Short, GBPUSD na Gold Mixed Bias
Dollar na -aga n'ihu na -eche nrụgide bearish + na -adị ogologo oge ka mmụba na -abawanye
Bitcoin rutere May nke kachasị elu + Ethereum ruo $ 4,400Ọktoba 14, 2021 - 4: 07 pm
CADCHF Swing Trade na Uru + Bitcoin ruo $ 70,000?Ọktoba 13, 2021 - 3: 24 pm
Dollar na -ekpochapụ kwa afọ elu + CADCHF Swing TradeỌktoba 12, 2021 - 4: 20 pm
Nsonaazụ nkwụnye ụgwọ na-abụghị ọrụ ugbo + ahịa azụmaahịa na-alaghachi azụ n'ihu ụkwụ ọzọỌktoba 8, 2021 - 4: 54 pm
Dollar ga -ajụ 94.125 + Ethereum na -achọ $ 4,000Ọktoba 7, 2021 - 4: 04 pm
Soro ndi obodo anyi taa na Discord ma kparita ndi ahia anyi na ndi ozo! #Azụmaahịa Forex https://t.co/2RRYlrnJYH
483 Ụzọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ,
Ọnụahịa ihe nyocha - AUDUSD, AUDJPY & CADJPY Ntughari Uru kwa izu + Outlook’s Market nke izu na-abịa